NGABA I-EARACHE OKANYE I-TINNITUS LUPHAWU LWE-COVID-19? CHAZA OGQIRHA - I-COVID-19
Ngaba i-Earache okanye i-Tinnitus inokuba yi-COVID-19 Syndrome, ngokukaGqirha
Njengoko i-COVID-19 iqhubeka nokusasazeka, izazinzulu zifumanisa ukuba kunokubangela ukubulawa kweempawu, ezinye zinqabile kunezinye. Xa ubhubhane we-coronavirus waqala ukubetha i-U.S., Amagosa ezempilo oluntu adwelise kuphela imiqondiso emithathu yokugula ekufuneka eyijongile: umkhuhlane, ukukhohlela kunye ukuqhawukelwa ngumphefumlo .
Olu luhlu, ewe, lukhule kakhulu kwaye ngoku lubandakanya ezinye iimpawu ezinxulumene nezifo zokuphefumla, ezinje ukudinwa okungaphaya , intloko ebuhlungu , kunye umqala obuhlungu . Le ntsholongwane ikwabangela imiba yezempilo ehlala ihleli kubantu abathile ababizwa ngokuba I-COVID-19 yokutsala ixesha elide, oxela ukufumana iziphumo ebezingalindelekanga ezinje ukulahleka kweenwele , iingxaki zememori, kunye ukubetha kwentliziyo iinyanga emva kokuqala ukugula.
Ngoku, olunye uphawu lubonakala ngathi lufumana i-buzz: iindlebe, ezinokubangela iintlungu, uvakalelo lokuvaleka, kunye nokuva okungafunekiyo. Kukho iingxelo zabantu abane-COVID-19 abaneendlebe, kwaye kukho ubukho bendalo ngayo, utsho UThomas Russo, MD , unjingalwazi kunye nomphathi wezifo ezasulelayo kwiYunivesithi yaseBuffalo eNew York.
Tinnitus , imeko ebangela ukukhala, ukugquma, ukucofa, okanye ukubetha ezindlebeni, kuye kwadityaniswa ne-COVID-19, ngamanye amaxesha ineziphumo ezibi. UKent Taylor, u-CEO weTexas Roadhouse, usweleke ngokuzibulala emva kokufumana i-tinnitus kunye nezinye Thumela iimpawu ezinxulumene ne-COVID , ngokwengxelo edibeneyo ekhutshwe lusapho lukaTaylor kunye neTexas Roadhouse ekwabelwana ngayo Uthintelo . Wayeneminyaka engama-65.
UKent walwa kwaye walwa nzima njengentshatsheli yangaphambili, kodwa ukubandezeleka okuye kwanda kakhulu kwiintsuku zamva nje kwaba yinto engenakunyamezeleka, isitatimende sifundeka, siqaphela ukuba uTaylor usandula ukuzibophelela ukuxhasa ngemali isifundo sonyango ukunceda amalungu omkhosi nawo ahluphekayo tinnitus.
11:11 inani leengelosi
Oku kuphakamisa imibuzo emininzi, kodwa ngaba ngokuzenzekelayo kufuneka ucinge ukuba une-COVID-19 ukuba uneempawu ezinxulumene nendlebe? Nantsi into ethethwa ngoogqirha.
Okokuqala, ziziphi iimpawu ezisemthethweni ze-COVID-19?
Ngokwe- Amaziko oLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo (CDC), ezona mpawu zixhaphakileyo zenoveli coronavirus zibandakanya:
Umkhuhlane okanye ubanda
Ukuphefumla kancinci okanye ukuphefumla nzima
Ubuhlungu bemisipha okanye bomzimba
Ukuphulukana nencasa okanye ivumba elitsha
Ukuxinana okanye ukuphuma empumlweni
Nangona kunjalo, iarhente iyaqaphela ukuba olu luhlu alugubungeli zonke iimpawu ezinokubakho. Njengokuba, irhashalala kwaye iliso elipinki zidityaniswe ne-COVID-19, kodwa kufuneka uphando olungaphaya ukuqonda ukuba ezi ziphumo bezingalindelekanga zinxulunyaniswa njani nentsholongwane.
Ngaba i-earache luphawu lwe-COVID-19?
Inkqubo ye- I-World Health Organization (I-WHO) ayidwelisi iindlebe njengeempawu ze-COVID-19 kwaye iimpawu zeendlebe azibuzwa rhoqo njengenxalenye yemibuzo yokuhlola i-COVID-19 e-U.S. NjengeCDC, i-WHO iqinisekisa nje ukuba Amava obuhlungu ukusuka kwi-coronavirus.
Kodwa oogqirha bayavuma ukuba kunokwenzeka ukuba ube ne-earache evela kwi-COVID-19, nangona kubonakala ngathi ayisiyophawu oluqhelekileyo njenge ifiva okanye ukukhohlela owomileyo . Kukwiimpawu ezininzi ongazilindela, itsho ingcali yesifo esosulelayo UAmesh A. Adalja, MD , umphengululi omkhulu kwiziko likaJohn Hopkins loKhuseleko lwezeMpilo.
Khange ndibone oku ngesinye sezigulana zam, wongeza uRichard Watkins, MD, ugqirha wezifo ezosulelayo kunye nonjingalwazi kwezamayeza kwiYunivesithi yoNyango yaseNyakatho-mpuma yeOhio. Ugqirha Adalja uqinisekisa ukuba akanayo.
Ewe, inokuba yinto nje enqabileyo yokubonakalisa intsholongwane- kwaye izazinzulu ziyomba kunxibelelwano. Le yindawo esebenzayo yophando, utsho UElliott D. Kozin, MD , Ingcali ye-otolaryngologist eMassachusetts Eye kunye neNdlebe. Ngokuqhelekileyo ayaziwa ukuba zeziphi iimpawu zeendlebe ezinokuthi zibonise i-COVID-19.
Ukuzivocavoca umzimba ukulahla amanqatha esisu
I-COVID-19 ingayibangela njani indlebe?
Ukuza kuthi ga ngoku, kukho iingxelo ezipapashiweyo ezichonge i-SARS-CoV-2 (inoveli coronavirus) phakathi endlebeni, uGqirha Kozin uyacacisa. Nangona kunjalo, asazi ukuba ubukho bentsholongwane bunokubangela naziphi na iimpawu zokuva. Ngamanye amagama, i-SARS-CoV-2 inokubakho, kodwa ingazisi zimpawu zibonakalayo.
Kukho iingcamango ezithile. Uninzi lwezigulana, zinikwe idatha efumanekayo, iimpawu zokuva kunokwenzeka ngenxa yokuvuvukala kwesibini indlela yomoya ephezulu , ebandakanya impumlo, umlomo, umlomo, umqala, kunye nebhokisi yelizwi, utshilo uGqirha Kozin. Oko kwathethi, ukuqonda kwethu intsholongwane kunye nefuthe layo emzimbeni kuyatshintsha mihla le.
I-COVID-19 nayo inokubangela ukudumba kwizono , ngasemva komqala wakho, kunye neetyhubhu ze-eustachian (ezibaleka ukusuka kwindlebe esembindini ziye emqaleni nasemva kwempumlo yomqala). Oko kunokubangela ukungathandeki endlebeni yakho, utshilo uGqirha Adalja.
Ngaba i-tinnitus inokuba luphawu lwe-COVID-19?
I-Tinnitus inokuba ithambile, ingxola, kwaye iphakame okanye iphantsi, ngokutsho kwe IZiko leLizwe leZithulu kunye nokunye ukuphazamiseka koNxibelelwano (NIDCD). Izandi zibonisa ukuba kukho into engalunganga kwinkqubo yokuva, kwaye inokubangelwa luluhlu lwezinto. Oku kubandakanya:
I-Earwax ibhloka umsele wendlebe
Usulelo lwendlebe kunye nesinus
Izifo zentliziyo okanye zemithambo yegazi
Utshintsho lwehormonal kwabasetyhini
I-Tinnitus inokuba luphawu oluqhelekileyo lwe-COVID-19. Oko kuthetha ukuba ayenzeki kakhulu, kodwa yona unako yenzeke. Uphononongo lwamva nje lupapashwe kwi- Ijenali yaMazwe ngaMazwe yeAudiology Uhlalutye iingxelo zamatyala angama-28 kunye nezifundo ezingama-28 ezinqamlezileyo, zityhila ukuba phakathi kwe-7% ukuya kwi-15% yabantu abadala abafunyaniswa ukuba bane-COVID-19 banoluhlobo oluthile lokuva. Olona phawu luxhaphakileyo, ngokufunyenweyo, yi-tinnitus, elandelwa bubunzima bokuva kwaye i-vertigo . Abaphandi bayaqaphela, nangona kunjalo, ukuba oku kunokuba luqikelelo olugqithisileyo kunikwe ukuba idatha ayisoloko ichaza ngokucacileyo ukuba abantu bayasokola ngemicimbi yokuva ngaphambi kokuba bafumane isifo.
uthini u1111 ngokomoya
Nokuba ithathwa njani i-tinnitus evela kwi-COVID-19, iingcali zithi kubonakala ngathi kukho ikhonkco. Siyazi ukuba i-coronavirus entsha ayenzi nje zichaphazela imiphunga -Inokuchaphazela inkqubo ye-nervous central, ingqondo , kunye namanye amalungu, utshilo uGqirha Russo. Ngokweempawu zeendlebe, i-COVID-19 inokuthi ichaphazele imithambo-luvo kwinkqubo ye-vestibular, ebandakanya indlebe yangaphakathi nengqondo.
Kungaba yindlela efanayo nento ebangela ukulahleka kwencasa kunye nevumba-ukudumba okanye ukonakala kwimithambo yegazi ebonelela ngokwakhiwa kweatomical echaphazelekayo, utshilo uGqirha Adalja. Okwangoku, isizathu sokuba i-COVID-19 inokubangela ukuba i-tinnitus icace gca.
Okukwintsusa: Ukuba unentloko okanye i-tinnitus, oko akuthethi ukuba une-COVID-19.
I-COVID-19 inokubangela iqela leempawu, utshilo uGqirha Kozin. Nangona kunjalo, zininzi izinto ezibangela imiba enxulumene nendlebe, kubandakanya usulelo, ukwakhiwa kweendlebe, okanye notshintsho kuxinzelelo lwendlebe. Ukuba ufumana i-earache okanye i-tinnitus ngaphandle kweminye imiqondiso ye-coronavirus, mhlawumbi awunakukhathazeka malunga ne-COVID-19.
Ewe kunjalo, ukuba kunokwenzeka uphuhlise indlebe kwaye nawe yenza bonisa ezinye iimpawu zokugula, uGqirha Russo ucebisa ukuba ubize ugqirha wakho ukuba axoxe ngeempawu zakho. Xa ungathandabuzeki, kuhlala kukhuselekile ukuvavanywa kunokuba kungenjalo, utsho.
Ukuba intlungu yendlebe iqhubeka ixesha elide kuneentsuku ezimbalwa okanye iba mandundu ngokuhamba kwexesha, tsalela ugqirha wakho. Banokukunceda ekuchongeni umba kwaye bacebise unyango ukuba luyafuneka.
Ukuba wena okanye umntu omaziyo ukwimo kaxakeka, tsalela umnxeba Umzila weSizwe wokuThintela ukuzibulala Nge-800-273-TALK (8255) okanye utsalele umnxeba ku-911 kwangoko.
Eli nqaku lichanekile ngexesha lokushicilela. Nangona kunjalo, njengoko ubhubhane we-COVID-19 uguquka ngokukhawuleza kunye noluntu lwenzululwazi lokuqonda inoveli coronavirus, olunye ulwazi lunokuthi lutshintshe okoko lagqityelwa ukuhlaziywa. Ngelixa sizimisele ukugcina onke amabali ethu esesikhathini, nceda undwendwele izibonelelo ezikwi-Intanethi ezibonelelwa ngu i-CDC , I-WHO , kwaye wena isebe lezempilo loluntu ukuhlala unolwazi kwiindaba zamva nje. Soloko uthetha nogqirha wakho ngeengcebiso zonyango.
Yiya apha ukuze ujoyine iPremium Premium (elona xabiso lethu libalaseleyo, konke ukufikelela kwisicwangciso), rhuma kwimagazini, okanye ufumane ukufikelela kwidijithali kuphela.
injani into yokulunywa sisigcawu
zingaphi iikhalori ezitshiswayo yiyoga
wenze igumbi lakho lokulala licofe
Izihlangu ezihamba phambili ze-plantar fasciitis
kuthetha ukuthini ukubona i-333